संसद भंग गर्नुको साटो ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो : गौतम – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
संसद भंग गर्नुको साटो ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो : गौतम
२३ पुष, २०७७ १६:४८ मा प्रकाशित
काठमाडौं – राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद भंग गर्नुको साटो पार्टी जोगाउन केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दै गौतमले प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेको विषयमा धारणा राखेका हुन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित हुँदासम्म चुपचाप बसेका नेता गौतमले यस विषयमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
गौतमले आफू प्रधानमन्त्रीको कटु आलोचक भए पनि ४३ वर्षदेखिको सहयोद्धा भएको सम्झना त्यत्तिबेला राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे । ओली दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा कतिपय सुझाव ग्रहण गरेको तर, संसद् विघटनको विषयमा छलफल नगरेको भन्दै गौतमले गुनासोसमेत गरे । उनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् भंग गर्नुको साटो राजीनामा दिँदा पार्टी जोगिन्छ भन्नेकुरा प्रधानमन्त्रीले सोच्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको म कटु आलोचक हुँ । उहाँको कार्यशैलीले पार्टीमा धेरै विवाद भए । तर, उहाँ मेरो ४३ वर्षदेखिको सहयोद्धा पनि हो । उहाँलाई मैले धेरै पटक शैली सुधार गर्न सल्लाह दिएको छु । दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा धेरै अनुरोध गरेँ । कतिपय सुझाव ग्रहण गर्नुभयो तर कतिपय ग्रहण गर्नु भएन । तर, अहिले पनि उहाँले मलाई मित्रको रुपमा सम्मान गर्नुहु्न्छ’, ओलीसँगको सम्बन्धको व्याख्या गर्दै गौतमले भने, ‘यस पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा उहाँले मलाई सोध्नु पनि भएन । उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको थियो- मलाई अविश्वासद्वारा प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्ने काम भए त्यो दुभाग्यपूर्ण हुन्छ । मैले भनेको थिएँ, -अल्पमतमा परे पार्टी जोगाउनका निम्ति प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’
नेता गौतमले आफू ओलीको ठाउँमा भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगाडि नै राजीनामा दिने बताए । ‘म त्यो ठाउँमा भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु अगाडि नै राजीनामा दिन्थेँ’, गौतमले भने, ‘त्यसले मैले मिहिनेत गरेर निर्माण गरेको पार्टी एकता जोगिने थियो । आगामी दिनमा पनि अरुलाई शिक्षा हुन्थ्यो ।’
संसद विघटन असंवैधानिक कदम भने पनि अब संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएपछि यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ले धारणा गौतमले राखेका छन् ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मैले असंवैधानिक कदम हो भने तर, सर्वोच्चमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमा लगेपछि असंवैधानिक भन्न मिल्दैन त्यसपछि म चुप लागेको छु’, गौतमले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगिसकेपछि अब असंवैधानिक भन्दा सर्वोच्च अदालतको अपमान हुन्छ ।’
‘पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुँदैन भन्नु मूर्खता’
गौतमले पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुँदा आफू दुवै समूहमा नभएको बताए । उनले तीन वर्षमै विभाजित हुनुपर्ने भए पार्टी एकता किन गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । गौतमले पार्टीमा अन्तरविरोध हुँदैन भन्नु मूर्खता भएको भन्दै अन्तर पार्टी संघर्ष बिना हिँड्न नसकिने बताए ।
‘पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ । तर, म कुनै समूहमा छैन । तीन वर्षमा विभाजित गर्नुपर्ने थियो भने एकता किन गर्नु ?’, गौतमले भने, ‘पार्टीभित्र अन्तरविरोध हुँदैन भन्नु जस्तो मूर्खता अर्को हुँदैन । अन्तरपार्टी संघर्ष बिना राजनीतिक पार्टी हिँड्न सक्दैन ।’
गौतमले नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि अझै कानुनी रुपमा के हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘विवाद समाधान गर्दा पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ । नेकपा राजनीतिक जीवनमा विभाजित छ । तर, कानुनी विषयमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन’, गौतमले भने ।
यसरी विवाद गर्दा ऋषी कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आफ्नो भएको दाबी गर्ने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले कट्टेलले नेकपा पाए फेरि एउटा समूह एमाले र अर्को समूह एकीकृत नेकपा बन्ने बताए ।
‘नेकपाको विवादमा निर्णाय ऋषी कट्टेलमा गयो भने एउटा पक्ष एमाले हुने होला ! अर्को पक्ष एकीकृत नेकपा हुने होला ! दुवै पक्षमा गल्ती कमजोरी देखिराखेको छु । फेरि एकतामा जान सकिन्छ कि भन्ने विषयमा मैले सोचेको छु’, गौतमले भने । गौतमले अहिले पनि पार्टी एकता अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।